လူမှုကွန်ယက်မှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာတဲ့ သိထားသင့်တဲ့ စကားလုံးများ – Trend.com.mm
လူမှုကွန်ယက်မှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာတဲ့ သိထားသင့်တဲ့ စကားလုံးများ
ခေတ်ကာလအလိုက် စကားလုံးအလန်းစားကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ခ် တွေမှာကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အသုံးပြုလာကြတာကိုတွေ့ နေရပါတယ်။ စကားလုံးအလန်းတွေကိုပဲသိရုံနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ကိုမှီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စာတိုကောက်တွေ သင်္ကေသအသုံးအနှုန်းတွေပါ သိထားနိုင်ရင်တော့ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့မှာကိုစိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။အသုံးများတဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ စာလုံးအတိုကောက်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
@ = at (mention)
@ ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကိုတည်နေရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြသလိုဥပမာ – Freedom @ work!
၊ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွီတာအစရှတဲ့ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ခ် တွေမှာဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
ထင်ပေါ်မြင်သာတဲ့ စကားစု၊ အကြောင်းအရာ၊ အစီအစဉ် တွေသာမကစိတ်ခံစားချက် အစရှိတဲ့ ကိုယ်နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ စကားလုံးကိုအများနဲ့ အတူတူဝေငှအသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာ# ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
CC ကိုတော့ အီးမေးလ်တွေမှာတွေ့ မြင်ရတာများပါတယ်။ ကာဗွန်မိတ္တူ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မိတ္တူဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲကိုယ် ရေးသားထားပြီးပေးပို့ ချင်တဲ့ စာတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ရေးနေစရာ/ပြန်ပို့ နေစရာမလိုပဲ sent to ရဲ့ Cc နေရာမှာကိုယ်ပေးပို့ လိုသူတွေရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုရိုက်ထည့်ရုံနဲ့အားလုံးဆီကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။
DM ကတော့ တိုက်ရိုက်စာပေးပို့ ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တခြားသူတွေ မသိစေချင်တဲ့ အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ စာတွေကိုပေးပို့ စေချင်ရင် DM နဲ့ အတိုကောက် ရေးသားကြပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခုဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခုဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ မရှိဘူးလို့ ပြောချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။
TGIF = Thanks God! It’s Friday.
WTH = What The H**